Gịnị kpatara Anyị - A na-ere ahịa mgbasa ozi maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
cart / $84.97
×	 Bamboo Aromatherapy Essential Oil Holder A001 - 1 Piece (Sample) - $ 24.99	1 × $24.99
×	 Cheapnut Mkpụrụ mmanụ na-esi ísì ụtọ Diffuser X131 - 1 Ibe (Sample) - $ 24.99	1 × $24.99
×	 Top 6 - 10ml Mmanụ Dị Mkpa E128 Mkpa Mmanụ Mmanụ Aromatherapy Starter Kit - 1 Set (6 karama) - $ 34.99	1 × $34.99
View ụgbọ ibuLelee
Ntak emi US
Onye ndu ụwa niile na teknụzụ Aroma diffuser.
Nke a gụnyere isi ihe na-esi ísì ụtọ, mmanụ dị mkpa, na ikuku ikuku anyị kachasị ere. Anyi nwere okacha iche na emeputa Aroma diffuser.In 2008, anyi gafere asambodo ISO9001. Yabụ anyị agbagoro ISO kemgbe ihe karịrị afọ iri. A na-ere Aroka ihe dị mma n'ụwa niile ọnụego nke nde 10 n'otu afọ.
Ọpụrụiche anyị bụ ikike anyị iji chụpụ echiche ọhụụ na-amị mkpụrụ, na-ekepụta ihe kachasị na-agbasa mgbasa iji bulie ahụmịhe gị. Ngwaọrụ mara mma nke ceramiki nwere ike nke Bluetooth®, ikuku na-enweghị ikuku, yana ndị na-enye mmiri mmiri bụ ihe atụ ole na ole nke AromaEasy ™ kpughere ụwa.
A tọrọ ntọala November 6th 2008
Ire ahịa 2018 20 nde USD
isi ụlọ ọrụ Zhongshan Qixiang Eletrọniki Ngwaọrụ Co., Ltd (Zhongshan China)
Alaka (International) Germany
Ndị enyemaka Shenzhen Mitao E-azụmahịa Co. Ltd (Shenzhen China)
ọrụ > 200
N'ime ụlọ ọrụ anyị, anyị na-eji ụzọ mmepụta kachasị ọhụrụ na mmepụta. Anyị na-emepụta ihe karịrị nde 2 nde! Ihe karịrị ndị ọrụ narị abụọ bụ ọkachamara na-arụ ọrụ dị elu.
Ọpụrụiche anyị bụ ikike anyị iji chụpụ echiche ndị ọhụrụ gaa na-amị mkpụrụ, na-ekepụta ihe kachasị na-emebisị ihe iji bulite ahụmịzụ gị.
Mmepụta anyị na ọnụọgụgụ
Ihe ntinye 3,000 m²
30 Igwe eji agba ntụtụ
4 ahịrị ọgbakọ
20,000 nkeji kwa ụbọchị
Dabere na: UL, CE, CCC, TÜV
ntinye aka na dabere na nkọwapụta ndị ahịa
I lekwasị anya na azụmaahịa gị ma anyị ga na-elekọta nkwakọba ngwaahịa na ọkọnọ chọrọ
Mbelata nke ngwaahịa na ọnụọgụ nke isi obodo
Ojiji mpaghara anyị na-eweta na ndị ọrụ maka ọrụ ndị ọzọ
Mwepu nke fọdụrụnụ nke ngwaahịa
Nyebata ihe n’ogologo achoro ya na akara di iche iche maka nhazi ozugbo
Nchekwa nke ọkọnọ n'ihi ebuka nchekwa
3D iko iko Diffuser
Osisi Mkpụrụ ọka Diffuser
Ihe dị n'ime seeramiiki
USA Ndị na-ahụ maka akwụkwọ nyocha Laboratories Inc. (UL)
Belgium Comité Electrotechnique Ndabere
China Asambodo Asambodo China (CCC)
Denmark Amụma Elektriske Materialkontroll (DEMKO)
Europe Fraunhofer Institut, Produktionstechnik na Automatisierung
France Union Technique de I'Electricité
United Kingdom Standkpụrụ Iwu UK (BSI)
Canada Association Canadian Standards Association (CSA)
Netherlands Naamloze Vennootschap na Keuring van Electrotechnische Materialen (KEMA)
Norway Fraunhofer Institut, Produktionstechnik na Automatisierung
Europe Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)
Austria Bandsterreichischer Verband für Elektrotechnik
Russia GOST-R Zertifizierung (SGS)
Switzerland Schweizerischer Elektronischer Verein (SEV) Nkechi
Nkwuputa uwa nile
Ngwaahịa nke AromaEasy® na-agbaso ụkpụrụ ndị a:
Kedụ ka anyị nwere ike isi bulie azụmahịa gị ọsọ?
Ọ bụrụ na ị nwere ike itinye ego karịrị $ 500 na ngwaahịa, anyị nwere ike inye aka mee nke gị Ngwa ahia, hazie ngwungwu, ma mezuo nrọ ika gi.
Anyị nwere ike ị nye gị ebumpụta ụwa gị niile, gụnyere akara nkeonwe, FNSKU akwụkwọ mmado, na-ebuga Amazon, na-agbada site na China maka ịzụ ahịa ndị na-ere ahịa.
Ndebanye aha nke onwe
Eleghị anya ịchọrọ inwe aha gị ma ọ bụ ozi nke gị na onye na-ele ya. Anyị nwere ike ịnye njirimara nke onye na-akpagbu anyị na enweghị ego na-abụghị ndị ọzọ ihe osise na idobere ya.
● Obere MOQ
Peeji ngwaahịa AromaEasy na-enye ọnụ ahịa ọnụahịa doro anya ebe ndị na-ere ahịa
nwere ike inweta onyinye dị iche iche dabere na ịchọrọ ahịa. Anyị na-enyekwa n'ịntanetịọrụ nyocha ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ngwakọta ngwaahịa dị iche iche ma ọ bụ nnukwu iwu
Development Ọganihu Ngwaahịa
Y’oburu n’inwe echiche ahia (kickstart, mobfunding), mana imaghi otu esi enweta ya rụpụtara, anyị na-eduzi gị nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Ọkara ma ọ bụ Nnukwu Business
Anyị nwere ike ịnye ọnụahịa dị ala, ndị otu egwuregwu 20, yana ihe ndị ọzọ iji kwado azụmaahịa gị na-eto eto.
● Ọnụahịa dị mma
Ọdịdị ọnụahịa anyị doro anya ma enweghị ụgwọ zoro ezo na ya. Ọnụahịa anyị bụ otu nke asọmpi kachasị asọmpi na ụwa, yana ọ bụ naanị obere ihe ihe ndị ọzọ America ma ọ bụ ndị na-emepụta Europe na-ebu gị ebubo. ihe eji eme osiso mkpa ọgbakọ. Anyị na-anwa ike anyị iji chekwaa ego na oge gị.
N’afọ niile anyị, anyị ji mpako na anyị na-ejide ọnụego mbịpụta nke oge 99%. May nwere ike ịhọrọ DHL na ọrụ ozi ndị ọzọ maka itule ọsọ na mmefu ego. Anyị na-eji ọrụ sitere n'aka ụlọ ọrụ ndị a pụrụ ịdabere na ma ama.
24 awa Ọrụ Ndị Ahịa
Mgbe ọ bụla ị nwere nsogbu ọ bụla, ịnwere ike ị nweta ọrụ ndị ahịa dị ndụ Onye ịza ozi ịntanetị gị ma ọ bụ ozi gị.
Kpụrụ dị mma na gburugburu ebe obibi
AromaEasy® nwere nkwa di elu maka odi nma na gburugburu ya. Maka nke a, ndị isi ụlọ ọrụ ewebatala usoro njikwa ejikọtara ọnụ maka ịdị mma na gburugburu ebe obibi dabere na DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 na DIN EN ISO 50001.
Makpụrụ AromaEasy® na amụma gburugburu ebe obibi gbadoro anya igbo mkpa ahịa ma mezuo ihe ndị ahịa chọrọ, yana itinye nchebe gburugburu ebe obibi. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ afọ ojuju ndị ahịa na ntụkwasị obi.
Ndị na-egosi nke a bụ ihe ịga nke ọma akụ na ụba nke ụlọ ọrụ na mmekọrịta ndị ahịa na-adịte aka.
Mmezu nke agwa anyị na ụkpụrụ gburugburu anyị bụ ọrụ dị mkpa na ọrụ na-aga n'ihu nke ndị isi na ndị ọrụ n'otu n'otu. E gosipụtara ụkpụrụ anyị dị elu na usoro ndị a:
Ịga n'ihu n'ihu
Brandị Anyị Na-atụkwasị Obi Anyị
AromaEasy ® -Ndị ọzọ!
Glass Diffuser, Osisi ọka Diffuser, Mkpa mmanụ, Ngwa
Otutu otutu, asambodo, na ihe ndozi
10,000+ ngwaahịa dị na ngwaahịa
Nhazi igwe di iche iche di otu
Enweghị ọrụ agaghị ekwe omume
Ngwọta maka ngwa ọ bụla
Nwepụta nke onwe, nyocha & ebe mmepe
Mpaghara mmeputa nke ihe dika 3,000㎡
Nnyefe mba na mba na mba
Anyị na-ebuga ya n'oge site na ihe karịrị ọnọdụ 52 gaa mba 160 n'ụwa niile
Ọrụ nnyefe 24h na ekele maka ngwa agha ọgbara ọhụrụ
Ọrụ Ndị Ahịa Raara Onwe
AromaEasy®rep ngosipụta na ọrụ ahaziri onwe gị ruru eru mgbe niile